किन गर्छन् बालकले अपराध ? |
किन गर्छन् बालकले अपराध ?
प्रकाशित मिति :2018-06-14 17:07:55
गएको फागुन ३ गते सप्तरीमा दुई वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन् । छिमेकी १३ वर्षका बालकले बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए । बिहान घरमै खेल्दै गरेकी छोरी रुँदै आमा छेउ आएपछि छोरीको अवस्था हेर्दा घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका अनुसार बलात्कार गर्ने बालकलाई सोही दिन नै नियन्त्रणमा लिइ कारबाही अगाडी बढाइएको थियो ।
यस्तै सप्तरीको हनुमाननगर गाउँपालिका ५ मा बालकबाटै बालिका बलात्कृत भइन् । यही जेठ १० गते ११ वर्षीया बालिकालाई १२ वर्षका बालकले बलात्कार गरेका थिए । जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई बालकको अनुसन्धान गइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ ।
गत साउनमा चिवतनस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरले लागू औषधसहित एक बालकलाई पक्राउ ग¥यो । चितवनको भरतपुर उपमहानगरपालिका–९ निवासी ती १४ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले कावासोतीबाट लागू औषधसहित पक्राउ गरेको थियो ।
ना ४ ख ५५४५ नम्बरको बसमा नारायणगढतर्फ जांदै गरेका बालकको साथबाट प्रहरीले नाइट्रोजन एक सय पिस, पेनेरागन १० पिस, सेरेज्याक १० पिस, टल्गेशल नामक आगूऔषध १० र सिरिन्ज ४ पिससहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तीन महिना कैद
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गएको चैत्रमा लागूऔषध अभियोगमा पक्राउ परेका तीन बालकलाई तीन महिनाको कैद फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजालसले चैत १८ गते उक्त फैसला सुनाएको थियो ।
काठमाडौं प्रहरीले उनीहरुलाई लागू औषधसहित पक्राउ गरि फागुन २३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । लागू औषधसहित पक्राउ परेका बालकहरू१२, १३ र १४ वर्षका थिए । फैसलासँगै उनीहरुलाई अहिले सुधार केन्द्रमा राखिएको छ ।
बलात्कारका फस्दै बालक
जिल्ला अदालत काठमाडौंको तथ्यांक अनुसार चालु आ.व.मा सबैभन्दा बढी बालक विरुद्ध बलात्कारका मुद्दा परेको छ । तथ्यांक अनुसार बलात्कारका १०, चोरीका ८ र लागूऔषधका २ मुद्दा परेका थिए । जसमध्ये १७ थान मुद्दा फैसला भइसकेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । यो चालु आवमा ०७३÷७४ का ४ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए ।
६८.९ प्रतिशत बालबिज्याँईका मुद्दा फैसला
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जम्मा २ सय ३५ वटा बालबिज्याई (अपराध) सम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये १ सय ६२ (६८.९ प्रतिशत) मुद्दाहरूफैसला भइसकेका छन् भने बाँकी ७३ अर्थात ३१.१ प्रतिशत मुद्दाहरूचालु अवस्थामा रहेका छन् ।
यस आ.व.मा फैसला भएका १ सय ६२ मुद्दामध्ये १ सय १९ (७३.५ प्रतिशत) मुद्दाहरुमा बालबालिका दोषी ठहर भएका छन् । यसै आर्थिक वर्षमा १४ प्रकृतिका २ सय ३५ वटा बालबिज्याई सम्बन्धी मुद्दामा ३ सय ४७ (३ बालिका) बालबालिका प्रतिवादी रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी १ सय १५ वटा मुद्दा जबरजस्ती करणी तथा थप १२ वटा जबरजस्ती करणी उद्योगका रहेका छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्राप्त १ सय ३८ वटा बालबिज्याई सम्बन्धी मद्दाहरूमध्ये १ सय २ अर्थात ७३.९ प्रतिशत मुद्दाहरूफैसला भइसकेका छन् । बालबालिकाले गर्ने बिज्याईहरुमा सबभन्दा बढी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या ३७ देखिएको छ ।
त्यसपछि साधारण चोरी सम्बन्धी बालबिज्याईको संख्या २७ देखिन्छ भने लागू औषधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या १६ देखिन्छ ।
बालबिज्याईमा संलग्न रहेका ४ जना बालिका र २ सय ३४ जना बालक गरी कूल २ सय ३८ जना बालबालिका क्रमशः भक्तपुर, विराटनगर र कास्कीमा सञ्चालित तीनवटा बालसुधार गृहमा रहेका छन् ।
बढ्दैछन् बाल अपराधि
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ अन्तरगत दफा ३९ मा कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ । दफाको (क) मा कसुरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम वा पचहत्तर वर्षभन्दा माथि भएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ । यो कानून आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ । पुरानो मुलुकी ऐनमा कसुरदारको उमेर १६ वर्षभन्दा कम मानिएको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्र संघले नै १८ वर्ष मुनिकालाई बालक मानेको छ । हामीले त्यसलाई अहिले अवलम्बन गर्दै छौ ।
कसुरदारको उमेर १८ वर्ष वर्षभन्दा कम मान्दा अवराध गर्ने बालबालिका स्वत बढ्ने देखिन्छ । यसमा राज्य जिम्मेबार हुनुपर्छ । अबदेखि १८ वर्षका बालकले कुनै अपराध गरेमा बाबुको संरक्षणमा जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’
कानूनी व्यवस्थामा सजाय
र सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई साजय हुनेछ भनिएको छ ।
बालक किन अपराध गर्छ ?
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता शैलेख थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले परिवारहरूसंयुक्तबाट एकल परिवारमा विभाजन हुने क्रम बढ्दो छ । जसले गर्दा उनीहरुले पारिवारिक संस्कार नै सिक्न पाउदैनन् । अर्को कुरा बाबुआमा दुवै जागिरे हुँदा, सूचना प्रविधिको गलत प्रयोगले पनि यस्तो समस्या हुने गरेको छ ।’
यस्ता गलत प्रवृतिलाई रोक्न परिवार, समाज र राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने प्रवक्ता थापा बताउँछन् । गलत साथीको संगत, पारिवारिक विचलन, अभिभावकको उचित माया र स्नेह नपाउँदा पनि बालबालिका अपराधतिर अग्रसर हुन्छन् ।
यस्तै बढ्दो उमेरसँगै मान्छेमा यौन चाहानाको विकास हुन्छ । यदि बालबालिकाले सही यौन शिक्षा पाएनन् भने यौन जिज्ञासा मेटाउनका लागि पनि आफू भन्दा साना बालिका बलात्कार गर्छन् । जुन कुरा उनीहरुले अपराध हो भन्ने बुझेकै हुँदैनन् ।